Ihe onyonyo abụọ na-egosi Google smartwatches abụọ | Gam akporosis
N'ime izu ndị a gara aga, anyị nwere ozi abụọ nnọọ ihe ijuanya ya mere na oputara na Google bidoro iweputa ngwa nke ya. Otu bụ ihe ga-ekwe omume na anyị hụrụ afọ a mbụ Google ama, na ndị ọzọ n'ihi na nke smartwatches abụọ n'okpuru gam akporo Wear nke Mountain View n'onwe ya. Veryzọ abụọ na-adọrọ mmasị nke nwere ike ịkọ ọdịnihu maka afọ ole na ole sochirinụ.
Ugbu a bụ mgbe anyị nwere onyinyo ngosipụta nke abụọ ga-ekwe omume ese smart smart google nke akpọrọ ya aha "Angelfish" na "Swordfish"; ihe eji abuo abuo ya na onye inyeaka Google nke n’eme ka o weputa ya mgbe ekwuputala Nexus abuo nke HTC. Nkwupụta dum nke ọdịmma maka ihe ga-abụ atụmatụ ọhụrụ Google iji wetara anyị ngwaọrụ ya maka afọ ole na ole sochirinụ ma ọ bụrụ na ihe niile aga nke ọma.
Ekwesiri ikwuputa na anyi na-eche asusu banyere ihe ndi ozo nwere ike ime na usoro mmepe ha anọghịkwa nso na steeti a na-ahụ ekwentị Nexus a ga-ewepụta na ngwụcha oge ọkọchị.
Ihe onyonyo a na-egosi uwe abụọ a ka nwere ike ịbụ n'okpuru nnukwu mgbanwe ma na imewe ma na oru. Ha nwedịrị ike imepụta ihe ọzọ anyị na-ahụ na onyogho abụọ ahụ anyị nwere, yabụ ihe niile nwere ike ime ka ha wee hụ ìhè.
Esemokwu dị iche iche dị n'etiti smartwatches abụọ ahụ otu buru ibu, ndị «Angelfish», na nke na-adịkarị mfe maka «egwuregwu» anya. Mgbe «Swordfish» na arụ orụ di ka nwere Cleaner imewe na bụ nta, thinner na Mkpa ọkụ ka «Angelfish». Otu n'ime nkọwa ya nwere bụ na curved lee anya na bezel n'adịghị ka ndị ọzọ.
Anyị amaghị n'okpuru ụdị ika ga-oru, price na ọbụna obere mgbe ha ga-oru. Naanị ihe Angelfish ga-abụ smartwatch zuru oke na LTE, GPS na ihe mmetụta obi. Ọ na-anọgide na-echere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Ihe onyonyo ndị a na-egosi na gam akporo Wear smartwatches ga - ekwe omume site na Google
Ihe 3 kacha mma n'efu maka gam akporo